Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi) | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa lay addimey Axaddii sidaan Kuu eegayee Araggeeda taan Ku il-doogsadaay Ma illawsan tahay Axdigaad martiyo Meeshaad I tidhi Waan imanayaa. Immisaad farriin Ergo soo dirtood Oontiyo biyaha Hurdo aawaday Uga soommanayd Eed layga keeniyo Midna amar Illaahay Kuma aad maqnaanine Adigayska baaqdee Haddaad I tidhaahdo iman maayo Ma aadeen halkaad ogsooneyd Anigaa isla hadloo Mar waxaan idhaahdaa Ku illaawi maysoo Way imanne sii joog Mar waxaan idhaahdaa Axdigaydin dhigateen Kola oofin maysee Samir Eebbe qaadoo Ka fogow agteedaan Uurkayga geliyaa. Arimada jacayl baa I hogaaminaysoo Misna kuma adkaystoo Kama hoydo aydoo Naftu olol ma deysee. Indhaaga habeenkii Ku ilaalinaayoo …
Gabaygii Awaal Tiris, 01. Uub baad ku jirtaa qarsoone, 02. Ka soo baxa iilka Qaadka, 03. Adduunka ragoow mar kaalay, 04. Abuurtiyo heega daawo, 05. Awoodaha saaran daawo, 06. Falaadkiyo alabbadeeda, 07. Ilaah samihiisa daawo, 08. Udbaha iyo teedka daawo, 09. Aloolka ku jeeran daawo, 10. Hagoogta aslaysa daawo, 11. Cadceedda ifaysa daawo, 12. Ilwaadkiyo nuurka daawo, 13. Abaabul-caddaanta daawo, 14. Ummuuraha toosay daawo, 15. Dayaxa ishin-buuxsankiisa, 16. Aashaa socodkiisa daawo, 17. Cir-jiidhiyo ololka daawo, 18. Rugaa afo-gaalladiisa, 19. Laxaa iyo ururka daawo, 20. Aleelaha guudka daawo, 21. Habeenka amuuman daawo, 22. Shareerkiyo aqalladiisa, 23. Haddana ashqaraarradiisa, 24. Ardaayada gogosha …
Adigaan cirka u bixin Ama boodin leexada Ama badaha waaweyn Nafta aan ku biimayn Baariis adaan tegin Ama Boon ka sheekayn Barashada dalkaagaa Horta laga bogtaayoo Beryo laysku hawlaa Dhulku baaxad sooriyo Banan miidhan weeyaan Ama waa bus iyo oon Ninka buug ku haystow Beentaada weeyaan Balcad Jawhar Shalanbood Barakada Qoryooley Waxa canab bislaadee Baydhabi u gaar tahay Boosaaso iyo Beer Bixin-Duule Laaleys Biyo Guure Kalabaydh Beeraha Wajaalee Lagu reebay baahida Baardheere iyo Jilib Waa boqol kun oo mayl Dhulka lagu badhaadhee Beeyadu ku taallee Badar lagu abuuree Lagu ridey bariiskee Balka lagu tallaalee Muuskiyo babaygii Barkadeen xareeddoo Waxa taa …
Balliyada salkoodii iyo baaca webiyada marka boodh ka sare kaco rahu boholo dheer galo biyo lagu haloosiyo, dhulka oo basaasoo inta budul ku jiifsaday buska tarantarkiisii Isha lagala soo baqay, Allihii galshiyo baad ku ballaadhin jirayoow. Xaqa lagu bukoodiyo xaqa lagu bogsoodiyo inta laga badheedhiyo inta lagu badheedhee xumo loogu babac-dhigo, nafta bedenbedkeediyo bog intii xasilisiyo inta baal ku ledi karo burjigiyo hubaalaha berri lagu halleeyee lagu sugo ma barideen, bedad-guurka waayaha inta lagu baxnaanshee hiyi looga dhigo baan, inta lagu bariistiyo inta lagu baraarugo inta baaca noloshiyo runta lagu bilkeedee xaqa lagu bidhaansado. Inta baaxad dedan iyo inta taal …
HAL iyo HALKIIS, waa tix gaaban oo uu Abwaan Maxamed IBraahim Warsame (Hadraawi) ku sifaynayo arrimo ka mid ah ILaahay iyo awoodihiisa (SWT). Sidaa darteed mar haddii EEbbe iyo awoodihiisa laga hadlayo, waxaa waajib ah in aan lagu deg-degin, oo laga fiirsado dulucda iyo xigmadda ku hoos jirta heestan, si aan denbi uga iman. Waayo qofka ay ku cusub tahay, ama aan xog hore ka hayni wuxuu u arki karaa, ama u dareemi karaa wax sahlan ama fudud, Sifaha iyo dulucda tixdan ku lammaani, runtii aad bay u qoto dheer yihiin. Waxa aannu ku rajo weyn nahay, in haddii EEbbe …
Waa maanso cusub oo la magacbaxday mayal dheer oo uu curiyey abwaanka caanka ka ah dhulka Somalidu degto Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi) Waana maanso aan odhan karo waa dacwad dadka lagu xusuusinayo aakhiro oo qiimo aad u balaadhan xanbaarsan, waxaanay ka turjumaysaa sida uu hadraawi uga qayb qaadanayo waxyi galinta umada islaamka ah gaar ahaan kuwa ku hadla afka Somaliga, waxa kale oo ay wacyi galin ka tahay bahalka dhibka badan ku haya Somalida ee loo yaqaano qaadka iyo sida loo dayacay xaasaskii laga masuulka ahaa, Maansadina waa tan ee u dhugta:- Noloshu waa madawdahay Marin seegan baa …
001. Markay dani meeday tidhi 002. Maxaan talo meel ka deyey, 003. Markay dani maaha tidhi 004. Weyddiiyey qof meel ka deyey, 005. Markay dani maaha tidhi 006. Ku laabtay halkaan ka deyey, 007. Markay dani maaha tidhi 008. Ka sii deyey meel la-deyey. 009. Maxay doqonniino tidhi 010. Ruuxaan jirin raad ku doon, 011. Intaan isku duubay been 012. Ka buuxsadey labada dacal 013. Maxay runi daadi tidhi. 014. Maxaan arrin dawlis dhow 015. Ma-diiddo la-soo qor-qoray 016. Ku daabacan baal madow 017. Ku daawaday meel madow 018. Wax aan duluc sii ridneyn 019. Indhuu ku daraandareen. 020. Maxaan …
01. Maansaba dir bay leedihiyo daabac gooniyahe 02. Ninba wuxuu ka doontaa halkuu gaar u daaqsado e 03. Dadka uma gudboonee ragbay duuunyadiis tahaye 04. Deebaanka ruuxii hayaa lagaga daydaaye 05. Kani waa dux iyo sooryo iyo malabka doocaane 06. Waa dood macaanoo nin ragu lagu daweeyaaye 07. Waa gabay da’weynoo sannado dabaqu saarraaye 08. Waa doog Massaarriyo ku yaal Doollo iyo Hawde 09. Waa damal hadh weynoo midhaa daafta soo dhigaye 10. Waa ceel dad liqahoon fudayd loogu daadegine 11. Waa danan Ganaanoo fatahay dirirta cawleede 12. Waa dayr Shabeelloo dhulkiyo doojey beeraha’e 13. Waa daad rogmadey oo hadhsaday …
Waa Maansadii Abwaan Max’ed Ibraahim Warsame ‘HADRAAWI’ ee uu ka tiriyey Cudurka soomaalida dullaystay, facoodna ka reebay ee HAYB-SOOCA Horraantii Bishii May 2007. Abwaanka caanka ah ee “Hadraawi”. Hadraawi wuxuu gabaygan ka tirshey madal loo agaasimay dadka la haybsooco ee Soomaalida. Eebbe ayaa Quraankiisa Kariimka ah innoogu caddeeyey in qofka agtiisa gobta ka ahi yahay kan camalkiisu suubbanaado cabsida Rabbina ku dheer tahay. Waxay ila tahay ruux Eebbe u hogaansami waayey oo quudhsi dan mooday inaan gabaygan Ina Walanwal waxba deeqsiin karayn laakiin kolleyba isaga xilkii saarnaa waa ka dhacay mar haddii garaadka Eebbe siiyey uu ku iftiimiyey dulmigan …
Haddaan idhi Boqorkayow Waxaan idhi Boqorkayow Allow barashaan ogeyn Intay tahay baaxaddaa Qofkuna badow buu ka yahay Inuu kugu soo ban-dhigo Bayaannada aan fogeyn. Bishmaan u daraandarayn Inuu boqolkaaga magac Intuu Bisinkaagu yahay Ka sheego wax aan badnayn. Waxaad tahay gun iyo baar Ballaadh iyo deeq mug weyn Waxaad tahay beer janna ah Waxaad tahay baarri faxan, Intaad bixisaa raxmada Intaad burisaa raja ah Intaad hanataa ka badan Baxaalliga hawl adduun Wax-beelka intaan hurayn Bushaaro hayaad u tahay. Waxaad tahay baahi-laawe Waxaad tahay baahidayda. ILaahnimadaada buuxda Qof waayey ma baadi-doonin. Rugaa Boqortooyadaada Qofkii u bal-reebiwaayey Ma xeerin badbaadadiisa. Xuduudka baddaada …